Britain: Nin Soomaali Ah Oo Lagu Xukumay Xabsi Daa’in – somalilandtoday.com
Britain: Nin Soomaali Ah Oo Lagu Xukumay Xabsi Daa’in
(SLT- Manchester)-Nin Soomaali ah, oo isku dayay inuu dilo saddex qof, oo uu ku jiray askari ka tirsan booliska Britain ayaa lagu riday xukun xabsi daa’in ah.
Waxaa hore loogu sheegay in 11 sano oo xabsi ah lagu xukumi doono ka dib markii uu qirtay saddex nooc oo dambi ah, oo dhammaantood la xidhiidha isku day dil iyo fal argagixisanimo ah. Maxkamadda Manchester Crown ayaa ku dhawaaqday xukunka.
Maxamuud ayaa marka hore lagu xidhi doonaa meel ka mid ah cisbitaal amnigiisa si weyn loo adkeynayo.
Garsoore Stuart-Smith, oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sida ay wax u dhaceen u sheegay Mahdi, oo daggan xaafadda Cheetham Hill ee magaalada Manchester, wuxuuna ku yidhi ; “Waxaad adigoo si daggan ugu dhex socda goobta tareennada laga raaco aragtay lammaanaha”.
“Kadib waad daba raacday, waxaad lasoo baxday mid kamid ah toorriyahaaga waadna ku weerartay. Waxaad weerartay adigoo damacsan inaad disho”, ayuu yidhi garsooraha.
Maxamuud ayaa marka cisbitaalka laga saaro loo gudbin doonaa xabsi uu noloshiisa ku dhameysan doono.
13 dhaawac oo ninka haweeneyda la socday soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah jab, halka haweeneydana dhaawaca wajigeeda ku dhacay uu gaadhay ilaa lafta.
Askariga oo ka tirsanaa booliska gaadiidka ee Britain ayaa garabka laga tooriyeeyay ka hor inta aan ninka weerarka fulinayay la xidhin.
Afar askari, oo uu ku jiro Mr Valentine (qofka labaad ee dhinaca bidix) iyo labo shaqaale oo kale